Statement on Zimbabwe by the General Secretary of the World Council of Churches - Global Ministries
Today the people of Zimbabwe suffer one of the highest unemployment rates in Africa, live with a 600,000 per cent annual inflation rate, daily shortages of food and fuel and now see added insecurity and an even more tenuous future.
The people of Zimbabwe have faithfully exercised their right to vote. An observer mission from the WCC and the All-Africa Conference of Churches was present and has issued its report. Initially the Zimbabwe government dignified the election by agreeing to measures that ensured a degree of transparency about outcomes at the local level. Now it is time for the government of Zimbabwe to step forward, declare the full and complete results of the election and act in accordance with the people’s will. The longer the government remains silent about the real outcome of the election the greater the risk for the people of Zimbabwe and the future of their beloved country.
The World Council of Churches joins with churches across Zimbabwe in calling for the immediate release of the election results and for international support and action under the auspices of SADC, the African Union and the United Nations to achieve a peaceful resolution of this crisis.
Full text of the WCC Central Committee Statement on democratic electoral processes
Previous WCC press release on the election process in Zimbabwe